Margarekha भाग्यमानीसँग हुने यी कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस् – Margarekha
५. शास्त्रका अनुसार बिनाकारण वा ज्यादा रिसाउने बानी पनि देवी लक्ष्मीलाई क्रोधित बनाउने तरिका हो । जुन घरमा झगडाको माहौल बनिराख्छ, त्यहाँ लक्ष्मीले बास गर्दिनन् । यसकारण बिनाकारण रिसाउने बानी हटाउनु पर्दछ ।ज्ञान बिज्ञानबाट
२६ चैत्र २०७५, मंगलवार १३:०२ प्रकाशित